September 2016 – Radio KeyFM
Buuq ka dhashay Mooshin xilka looga qaadayo Gubernatooraha Nairobi
30th September 2016	Somali Language 0
Wakiilada baarlamanka kowntiga Nairobi ayaa isaga horyimid mooshin xilka looga qaadayo Evans Kidero oo uu kahor akhriyay mudanayaasha maalinkii shalay wakiilka Viwandani,Samuel Nyangwara. Mr Nyangwara ayaa bilaabay in uu akhriyo qoraalka mooshinka,waxaana kadib kasoo dhex galay mid kamid ah MCA-yada,iyadoo halkaasi uu buuq ka bilowday. MCAs-yada ayaa ku eedeeyay Nyangwara …
Hooyo Mataano Madaxa isaga dhegan oo Mayd ah ku Dhashay Cisbitaalka Mandera
Hooyo Makaay Muxumad ayaa ilmo madaxa isaga dhegen oo mataana ah ku dhashay cisbitaalka Mandera Referral Hospital. Hooyadan ayaa laga keenay Rhamu Dintu,waana markii ugu horaysay ee ay ku dhasho cisbitaal. Makaay ayaa horay usoo dhashay shan caruur ah oo ay baadiyaha ku dhashay. Keyfm oo ku booqatay Makaay cisbitaalka …
Booliska oo Baaraya Askari ku dilay Mombasa Darawal Mootada Saddex Lugooleyda
Darawal mootada saddex lugoolayda ah oo da’diisa lagu qiyaasay 25 sano ayaa lagu dilay wadada u dhaxaysa Mombasa iyo Lunga Lunga oo kowntiga Kwale. Darawalka ayaa lagu magacaabaa Tsuma Mumbo,waxaana xabad ugu dhuftay madaxa nin askari. Askariga ayaa la sheegay in uu daba joogay rag lagu tuhmayay ka ganacsiga mukhaadaraadka. …
Dowlada Mandera oo la Gaar siiyay Dawooyin
Dowlada Mandera ayaa ka heshay dawooyin ilaa Sh10 million lagu qiyaasayo kharashkooda xarumaha caafimaadka Iran ee Nairobi. Wasiirka caafimaadka Mandera Axmed Sheekj Maxamed ayaa sheegay dawooyinka in ay u qaybin doonaan ilaa 53 xarumo caafimaad. Dawooyinka ayaa dowlada kowntiga Mandera la gaarsiiyay Arbacadii. Axmed ayaa sheegay in tiro badan oo …
Mmsaw qosa ka Radio keyfm gavana kaunti Mandera Ali Roba tosa teen
29th September 2016	Borana Language 0
By Ibrahim Adan Ali Ibrahim Happy Qomi ten ta motuma ta keyFM qonqo nagaha waan nukeesat gafedhene aasaw brahim happiin tofateen gavana Ali Ibrahim Roba ka nuyin kesat odheefane sabab ini gad ejachu fedhuuf kiti gavana ka waga 2017. Kana aasaawi sunin chaqafadh. part one Part two
Mandera kaunti oo la sheegay inay hogaaminaysa dalka dhanka dhimasha hooyada iyo dhalaanka
29th September 2016	Somali Language 0
By Ibrahim Adan Ali kulan todobaadkan ka dhacay magaaladda Mandera ayaa waxaa walaac wayn laga muujiyay dhimashada faraha badan oo ku timaado hooyada iyo dhalaanka kautigaasi Mandera . Kulanka ayaa waxa la isku tusay in ay jirto dhimashadan ay timaado xilliya ay hooyada umulaysa . Ha’yada soo qaban qabisay kulankaan …
Kumaan kun oo ruux oo ay biya iyo cuna yari ay soo foodsaari kauntiga Tana Rifa
28th September 2016	Somali Language 0
Biya yari baahsan ayaa laga soo sheegayaan kauntiga Tana Rifa kadib markii abaaro xoogan ay ku dhufteen halkaasi dhowrkii bilood ee aynu ka soo gudubnay. Kumanaan qof oo ku dhaqan todobada tuulo degaanka Assa ayaa wararka waxay sheegayaan inay haysato biyo yari horseedikarta xalaada bina’aadinimo oo ba’an haddi ay aan …
Dowladda ayaa sheegtay in kharash badan ay ku gasho dadka ku dhinta shilalka wadooyinka.
Dowladda ayaa sheegtay in 300 oo bilyan oo shilin ay kaga baxdo wax yeelada ka dhalata shilika ka dhaca wadooyinka dalka sanad walbo. Dowladda ayaa sheegtay in lacagtaasi ay kaga baxdo dadka ku dhinta shililka wadooyinka iyo isbilaaka gayntooda iyo sidoo kale hantida ku burburta markuu shilka dhacay. Dowladda ayaa …
Dowladda oo diiday joojinta galayda laga soo dhoofiya dalk Yugaandha
Dowladda ayaa sheegtay inaysan joojin doonin bedeeca gallleyda ee ka timaada dalka deriska ah ee Yugaandha. Hadalkani ka soo baxay dhowladdu ayaa imanaya xilli beeralayda dalka ay cabasho ka muujinayaan galleyda badan oo ay sheegeen inay ka soo qulgulaysa dalka Yugaandha, waxayna sheegayaan in galleydaasi ay ku keenaysa hoos u …
Dadka qaba Cudurka HIV oo ka cabanaya Pepfar ka bixitaankeeda Kowntiyada Waqooyi
Bulshada la nool cudurka HIV/Aids ee kowntiga Marsabit ayaa kasoo horjeestay talaabada ay qaadayso hay’ad ka tirsan deeq bixiyayaasha oo ka shaqaynaysay cudurka HIV oo hada ku howlan in ay gobolka ka baxdo. Bishan September 6 ayaa waraaq loo qoray madaxa caafimaadka Marsabit Stephen Labarakwe ayaa xiriiriyaha qorshayaasha deg dega …